I-Ultrasonics Thuthukisa Ukusebenza Kwenqubo Ye-Biodiesel - Hielscher Ultrasound Technology
I-Ultrasonics Ithuthukisa I-Biodiesel Inqubo Yokusebenza
Njengoba izindleko zezinto eziphilayo ze-biodiesel zanda, izitshalo eziningi ze-biodiesel zizithola zisendaweni enzima. Ubuchwepheshe bokuxuba u-Hielscher obuqhubekayo bokwenza ngcono inqubo yakho yokukhiqiza ye-biodiesel ngokuphumela ezithelweni eziphakeme nangokunciphisa izindleko zakho.
Ukusebenza kahle kweBiodiesel
Namuhla, ukwenza i-biodiesel akukona nje ukwenza uphethiloli ovuselelekayo. Kubakhiqizi be-biodiesel lokhu kuyinselele yokukhiqiza i-biodiesel ephezulu ngezimpawu eziqhubekayo, kungakhathaliseki ukuthi izifo zinikeza ukudla ngezikhathi ezithile, uma izintengo zokudla zikhuphuka ngezindleko zokudla namandla. “Emvelweni wamanje, abakhiqizi abancinci kuphela abakwazi ukukhiqiza uphethiloli emkhawulweni omuhle.” kusho U-Bill Babler Wokuphathwa Kwezingozi Zokuqala ze-Capitol.
Uma ucabangela indawo entsha ye-biodiesel noma ukuthuthukiswa kwesitshalo sakho se-biodiesel bheka ubuchwepheshe be-Hielscher ultrasonic mixing ye-best biodiesel processing processing. Amadivayisi we-Hielscher ultrasonic ahlolwe futhi aqinisekiswe ezitshalweni eziningi ukwandisa isivuno se-biodiesel kanye nezindleko zokusebenza eziphansi. Lokhu kubandakanya osomabhizinisi abangu-1 mmgy kanye nezitshalo ze-biodiesel zezimboni ezingu-45 mmgy.
Ukusabela Kinetics Ukunciphisa Izinzuzo Zakho
Ngokuyinhloko, ukwenza i-biodiesel kusuka emafutheni, i-methanol (noma i-ethanol) ne-catalyst, inqubo yamakhemikhali elula. Inkinga ikhona kuma-chemical reaction kinetics. I-transesterification evamile ye-triglycerides kuya kwama-methyl esters amafutha (i-FAME) ne-glycerin ihamba kancane futhi ingaqedi. Ngesikhathi senqubo yokuguqulwa akuzona zonke izinhlobonhlobo ze-fatty acid eziphendulwa zibe yi-alkyl esters (biodiesel). Lokhu kunciphisa izinga lakho le-biodiesel futhi linikeze, kakhulu!
Ukuxuba okungcono kuholela ekuphumeni okungcono
Isikhathi eside sokuguqulwa kanye nokuthengwa kwe-biodiesel engaphansi kunakho okubangelwa ingxenye enkulu ekusetshenzisweni kwezinhlelo zokuxuba ezingafanele. Empeleni, i-oyile ne-methanol ayifakiwe. Ngakho-ke, udinga ukwakha i-methanol-in-oil emulsion. Lokhu kudinga imishini ye-emulsification esikhundleni sokuxuba okujwayelekile noma ama-stirrers. Ukuxubana kwe-Ultrasonic yokuzimela kuyindlela ephakeme kunazo zonke yokwakha ukuthuthwa kwe-size emasimini esilinganisweni esikhulu sokucubungula.
Kukhona ukuxhumana okuqondile phakathi komthamo we-methanol we-droplet ne-biodiesel isivuno kanye nesivinini sokuguqulwa. Lokhu kwenza ama-Hielscher ama-ultrasonic reactors ubuchwepheshe obukhiqizayo kakhulu embonini ye-biodiesel. Amadivaysi okuxuba ama-ultrasonic akhiqiza izinga eliphezulu le-biodiesel, ngokushesha.
Ukulondolozwa kokufakwa nokubuyiswa kabusha
Ukufakwa kwama-reactors e-Hielscher ultrasonic kumkhakha wakho wokusebenza we-biodiesel kunciphisa izindleko zakho zokusebenza, futhi.
I-Methanol Engaphezu Kakhulu
I-methanol eyengeziwe ayifuni ngesikhathi senqubo yokuguqulwa. Yengezwa ukusekela ama-kinetics yokusabela kwamakhemikhali kuphela futhi idinga ukubuyiselwa ekupheleni kwenqubo. I-methanol ebuyisiwe inemfanelo engaphansi, kuphela. Yingakho ukubuyiswa kwe-methanol kwandisa izindleko zakho zokucubungula.
Ukusetshenziswa kwama-reactors e-Hielscher ultrasonic kunciphisa inani elidingekayo le-methanol ngokweqile ngamaphesenti angu-50. Isilinganiso se-molar esiphakathi kwe-1: 4 noma i-1: 4.5 (i-oyile: i-methanol) inelungelo lokudla okuningi, uma usebenzisa i-Hielscher i-ultrasonic mixing.
Abakhiqizi abaningi be-biodiesel – ikakhulukazi abakhiqizi be-biodiesel bezinga lomphakathi – ukunciphisa izindleko zabo ngokushintshela ezintweni ezibonakalayo zekhwalithi empofu, njengamafutha ezilwane, amafutha okudlela avuselelwe noma amafutha omfucuza. Inqubo ye-ultrasonic iqinisa ngcono ukuguqulwa kwemiphumela kunoma yikuphi ukuphakelayo. Lokhu kwenza kube lula ukukhiqiza i-ASTM 6751 noma i-European EN 14212 ehambisana ne-biodiesel ehambisana namafutha aphezulu e-FFA noma amafutha aphezulu e-viscosity noma amafutha.
"Ngimangele indlela uHielscher ashintshe ngayo indlela esikhiqiza ngayo i-biodiesel. Akuyona nje inqubo eqhubekayo, kodwa sisindisa izinkulungwane ku-catalyst kanye nesikhathi. Ngiphakamisa ngokuqinile leyunithi kunoma ubani ocabangela indlela eqhubekayo yokukhiqiza. "
UMarcel Steinberg, u-EECOfuels
Inani le-Catalyst limelela ingxenyana engxenyeni yezindleko zokukhiqiza kwe-biodiesel kuphela. Njenge-methanol ngokweqile, izindleko zibangelwa izinga lokuthola futhi eliphansi le-glycerin. Ukuxuba i-Ultrasonic kuthuthukisa i-methanol-in-oil emulsification futhi kudala amaconsi amancane namancane.
Lokhu kuholela ekusatshalaliseni okungcono kanye nokwandisa ukusebenza kahle. Ngaphezu kwalokho, i-cavitation ye-ultrasonic ithuthukisa ukudlulisa-mass (bheka Sonochemistry). Ngenxa yalokho, ungagcina kuze kube ngu-50% wokuqhathaniswa uma uqhathaniswa nabaxube be-shear noma ama-stirrers.
Ikhwalithi ephezulu ye-Glycerin
I-Glycerin iwumkhiqizo wokukhiqizwa kwe-biodiesel. Inani eliphakeme lokuguqulwa kanye ne-methanol eyedlula ngokweqile kuholele ekuguqulweni kwamakhemikhali okusheshayo nakwehlukanisa ngokujulile kwe-glycerin. Ngenxa yezizathu ezichazwe ngenhla, i-glycerin iqukethe i-catalyst encane noma i-mono-glycerides futhi ibangela izindleko zokucwenga okuphansi.
Amandla kagesi nokushisa
I-Biodiesel iyi-fuel fuel. Ukuze ube luhlaza, amandla okudingeka ukuba akhule, ukuvuna nokucubungula kumele abe ngaphansi kwezinto eziqukethwe ku-biodiesel. Ukufaka ukuhlanganiswa kwe-Hielscher ultrasonic kunciphisa amandla okudingekayo ukucubungula. Amadivaysi e-ultrasonic e-Hielscher anokusebenza kahle (bheka ukusebenza kahle kwamandla) ekuguqulweni kukagesi ukuze kusetshenziswe imishini yokuxuba.
Amadivayisi we-Hielscher ultrasonic inqubo ye-approx. I-22 gallon ye-biodiesel esebenzisa u-0.1kWhr kagesi kuphela, okulingana nokusebenzisa i-amp watt ukukhanya eyi-100 kwehora elilodwa. Lena yingxenyana yokusetshenziswa kwamandla okuxuba ama-shear noma ama-mixer hydro-dynamic.
I ultrasonically basiza transesterification kungaba ngokuvamile ugijime at ephansi inqubo izinga lokushisa. Lokhu kunciphisa amandla okushisa okudingekayo, futhi.
Sicela ugcwalise leli fomu ukucela ulwazi oluthe xaxa mayelana ne-ultrasonics ekusetshenzisweni kwe-biodiesel.
I-Hielscher 2 MMGY Reactor
Sonocatalysis – Ultrasonically Assisted Catalysis
Umthelela wokudluliswa kweMisa ekukhiqizeni i-Biodiesel
Imithelela ye-Biodiesel ekukhipha ukukhishwa kwamanzi
I-Biodiesel Production Technology
Izindlela ze-Biodiesel Analytical
'Ukukhohlisa’ Indlela yokwenza i-Biodiesel
G&M Global Enterprises: Ukukhishwa kweMikhali & Ubunjiniyela
I-Technical Biodiesel yolwazi
Idatha ye-Biodiesel Emissions Database
I-BIOCO I-Biorefinery Technology
I-American Society of Agricultural and Biological Engineers
I-Algae Landa Lab – Ultrasonic Algae Extraction
I-Ultrasonication Ivikela Amandla Nezindleko